Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Masaf Of The Day
https://www.funneloftheday.com/ qaadataa kuu gaarka ah si dhab ah. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani qeexayaa waxa macluumaad shakhsiyeed oo aan u ururiyaan iyo sida aan u isticmaalno. Eeg Primer Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this si ay u bartaan dheeraad ah siyaasadaha gaarka ah ee guud oo ku saabsan.
Macluumaadka joogtada ah Collection
Dhamaan server web ay ula socdaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan martida ay. Macluumaadkan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, cinwaanada IP, faahfaahinta browser, timestamps iyo pages tilmaamayo. None macluumaadkan shakhsi tilmaami karaa martida u gaar ah in this site. Warbixinta waxaa dabagal ujeedooyin maamulka iyo dayactirka joogtada ah.
loo baahdo, https://www.funneloftheday.com/ isticmaalaa cookies ku kaydsan wax warbixin ah oo ku saabsan la door booqdaha ah iyo taariikhda si aad u wanaagsan u adeegi booqdaha iyo / ama soo bandhigaan booqdaha la content habka.
Xakamaynta Your Privacy
Ogsoonow in aad bedeli kartaa goobaha browser si aad u gab cookies haddii aad qabto walaac gaarka ah. Naafada cookies goobaha oo dhan laguma talinayo maadaama laga yaabo inuu kula isticmaalka goobaha qaar ka mid ah faragelin. ikhtiyaarka ugu fiican waa in gab ama karti u yeeshid kukiyada ku salaysan per-site. La tasho waraaqo browser aad u hesho tilmaamo ku saabsan sida loo xakameyn cookies iyo habab kale raadraaca. Liiskan links maamulka gaarka ah browser web sidoo kale waxaa laga yaabaa in faa'iido leh.
Welwel ama su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this lagu hagaajin karaa [email protected] caddeeymo dheeri.